Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Xukuumadda Ku Meel Gaarka ah, Yuusuf Xassan Ibraahim "Yuusuf Dheeg" ayaa Ku eedeeyay Waddamada Carabta inay gaabis ka noqdeen doorkii kaga aadanaa Dib u Heshiisiinta Somalia.
Yusuf Dheeg oo ka hadlayay Shir Jaraa’id oo uu ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in Waddamadda Carabta aysan kaalin firfircoon ka ciyaarin Dib u Heshiisiinta Soomaalida, Wuxuuna sheegay in taasi ay keentay in IGAD ay u gacan banaanaato Wadahadaladda Soomaalida uga socda Kenya.
Yusuf Dheeg waxa uu waydiistay Waddamadda Carabta inay dib u Jaleecaan Wadahadaladda Kenya uga socda Soomaalida, Wuxuuna sheegay inaan Looga maarmin dalalka Carabta dhinaca Dhaqaalaha, Maadaama Waddamadda IGAD aysan dhaqaale ahaan socodsiin Karin Shirka Kenya.
Yusuf Dheeg waxa uu sidoo kale sheegay in qoraalkii dhawaan uu soo saaray Dhigiisa Kenya, Stephan Kolonzo Mosiyooko ay soo dhawaynayso Dawladda Ku Meel Gaarka ah ee Somalia, Wuxuuna sheegay in haddii Qoraalkiisa uu xal u noqon karo dhibaatadda Somalia ay TNG-du gacan ka gaysan doonto Meel Marintiisa, Isagoo hoosta ka xariiqay in siyaasadoodu ay ku salaysan tahay Dib u Heshiisiinta iyo Nabadaynta Somalia.
Ergooyinka Soomaalida ah iyo Wakiiladda Hogaamiye Kooxeedyadda ka qayb galaya Shirka Kenya ayaa markii ugu horaysay qayla dhaan ka keenay Qodobka Dhimista Ergooyinka ee ku xusnaa Qoraalkii Kolonzo Mosiyooko,.
Ergooyinka Soomaalida ah iyo Wakiiladda Hogaamiye Kooxeedyadda u jooga Nairobi ayaa markii ugu horaysay si isku mid ah uga hadlay Tiradda Ergooyinka ee la dhimay, Waxayna sheegeen inaan la aqbali Karin in wax laga badalo Tiradii hore ee la isku ogaa inay ka qayb gasho Shirka Soomaalida uga socda Kenya.
Ergadda Soomaalida ah ee ka qayb galaysa Shirkaasi iyo Kooxda SRRC ayaa sheegay in Tiradda Ergooyinka ee Wasiirku ku soo koobay 203 ay tahay hanaan lagu marin habaabinayo Shirka Soomaalida, Waxayna sheegeen inay Wasiirka isku ogaayeen in Tiradda Ergooyinka loo dhaafo 366 qof, Laakiin Waxay sheegeen inay la yaabeen markii ay arkeen Qoraalkii Mosiyooko oo sida ay sheegeen laga yaabo inuu fashil ku keeno Shirka Kenya.
Qayla dhaantan ka timid Ergooyinka iyo Kooxaha Soomaalida Qaarkood ayaa laga yaabaa inay caqabad hor leh ku noqoto Shirka Soomaalida uga socda Kenya, Waxaana Murankan cusub uu meesha ka saaray is haysadkii Qodobka 30 aad ee Axdiga Ku Meel Gaarka ah oo imminka u muuqda inuusan Muran ka taagnayn, Laakiin waxa la isku haysto ay yihiin Tiradda Ergooyinka.
Gobaladda Dalka Somalia qaarkood ayaa waxaa ka billawday Tallaabooyin lagu Mamnuucayo Baasaboorka Kenya, kadib markii ay Kenya Dhinaceeda Mamnuucday Baasaboorka Somalia in lagu soo galo ama looga baxo dalkeeda.
Maamulka Gobalka Hiiraan ee Bartamaha Somalia ayaa noqday Maamulkii labaad ee si rasmiya u mamnuuca Baasaboorka Kenya, Waxaana hadal uu shalay soo saaray Maamulkaasi lagu sheegay in Baasaboorka Kenya aan looga safri Karin, laguna soo gali Karin Deegaanadda uu Maamulkaasi ka taliyo.
Guddoomiye Ku Xigeenka Gobalka Hiiraan, Eng, C/laahi Cabdi Koofi oo ka hadlayay Shir Jaraa’id oo uu ku qabtay Baladwayne ayaa ku amray Shaqaalaha Hay’adaha Samafalka ee ka hawl gala Hiiraan isla markaana haysta Baasaboorka Kenya inay si deg deg ah uga baxaan Gobalka Hiiraan, Wuxuuna sheegay in haddii ay go’aabkaasi u dhaga nuglaan waayaan ay dhici doonto in Sharciga la horkeeno qofkii lagu arko Baasaboor Kenyan ah.
Maamulka Gobaladda Galgaduud ayaa isna sheegay inay tallaabo taa la mida qaadanayaan Toddobaadka soo socda haddii aysan Kenya ka laaban go’aanka ay ku mamnuucday Baasaboorka Kenya.
Yusuf Xasan Ciyoow, Guddoomiyaha Gobalka Galgaduud, waxa uu sheegay inay aad uga xun yihiin Tallaabadda ay Kenya ku hor istaagtay Baasaboorka Soomaaliya, Wuxuuna sheegay inay xaq u leeyihiin inay qaataan go’aan kaas la mida haddii aysan Kenya si deg deg ah uga laaban go’aankeeda ay ku Mamnuucday Baasaboorka Somalia.
Maamulka Somali Land oo horay ugu dhawaaqay inay ka fiirsanayaan qaabkii ay u joojin lahaayeen Baasaboorka Kenya ayaan illaa iyo hadda isna wax tallaabo ah qaadin, Waxaana la filayaa inay ku biiraan Dhinacyadda mamnuucay Baasaboorka Kenya.
Maamul Gobaleedka Punt Land oo noqday Maamulkii ugu horeeyay ee Soomaaliya isla markaana mamnuuco Baasaboorka Kenya ayaan illaa iyo hadda wax dabacsanaan ah ka muujin go’aankaasi, Laakiin Dawladda Kenya oo laftigeeda ay saamayn ku yeesheen go’aanadda iska daba imaanaya ee lagu mamnuucayo Baasaboorkeda ayaa sheegay inay kala xaajoonayso Soomaalida go’aanadda ay qaateen.
Wararka ka imaanaya Magaalada Garoowe ee xarunta Maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in lagu dilay gurigiisa wasiir ku xigeenkii wasaarada Dawladaha Hoose iyo Horumarinta reer Miyiga Marxuum C/risaaq Cali Siciid(Qays).
Wasiir ku xigeenka ayaa sida wararku sheegayaan waxaa dilay mid ka mida laba xaas oo uu qabey.
Ilaa iyo haatan lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa dilka Wasiirka ku xigeenka.
Dilalka noocan oo qoyska ayaa ku soo badana deegaanada Puntland iyadoo bilo ka hor Magaalada Garoowe lagu dilay Agaasimihii Guud ee wasaaradaas oo uu dilay wiil uu adeer u ahaa.
Sidoo kale maalmo ka hor ayaa wiil yar wuxuu hooyadii ku dilay Magaalada Boosaso, wiilkaasi oo la sheegay inuu ahaa mid xabadi ay kaga fakatay inankan yar hooyadii.
Dilalkan ayaa waxaa inta badan sababa hubka noocyadiisa kala duwan oo dadka rayidka ah guryaha u yaal ama ay suuqayda la maraan.
Maamulka Puntland ayaan ilaa iyo iminka ka hadlin arintan ah dilka Wasiirkaasi ka tirsanaa Maamulka Puntland,laakiin waxaa socda baaritaan lagu ogaanayo sababta ka danbeysa Dilkaasi loo gaystay wasiir ku xigeenkii wasaarada Dawladaha Hoose iyo Horumarinta reer Miyiga Marxuum C/risaaq Cali Siciid(Qays)
Iyadoo ay beri ku began tahay Maalintii loogu baaqay Odayaasha Dhaqanka, iyo Hogaamiye Kooxeedyaddu inay ku yimaadaan Madasha Shirka ayeeysan illaa iyo hadda jirin cid dib ugu laabtay Shirka Kenya.
Ugaas C/laahi Ugaas Farax oo ka mida Odayaasha Dhaqanka ee Somalia ayaa sheegay inaysan illaa iyo hadda wax war galin ah soo gaarsiin Kenya, WUxuuna sheegay in go’aankaasi uu ka maqlay Warbaahinta oo kaliya.
Ugaasku waxa uu sheegay sidoo kale inay aad uga xun yihiin go’aanka ay Kenya ku mamnuucday Baasaboorka Soomaaliga ah, Wuxuuna sheegay in haddii aan go’aankaasi dib looga fiirsan ay adkaanayso qaabkii ay ku tagi lahaayeen Shirka Kenya,
Hogaamiye Kooxeedyadda qaarkood ayaa iyaguna go’aanka ku tilmaamay mid aan nuxur siyaasadeed lahayn, waxayna ku gacan sayreen inay dib ugu laabtaan Madasha Shirka Soomaalidu ka socdo ee Kenya.
Kenya oo Shirka Marti galinaysa ayaan iyaduna illaa iyo hadda wax dhaq dhaqaaq ah oo dib loogu soo celinayo dalkeeda odayaasha dhaqanka iyo Hogaamiye Kooxeedyadda Samayn, Iyadoo Diyaaridihii ay ballan qaaday inay u soo dirayso Sooomaaliyana aan illaa iyo hadda soo dirin.
Is rasaasayntan oo u dhaxaysa Kooxo Ciraaqiyiin ah iyo Ciidamada Maraykanka ayaa daba joogta dagaal shalay illlaa iyo xalay ka socday Magaaladaasi, Waxayna wararku sheegayaan in dagaalku uu shalay iyo xalay gaaray meeshii ugu xumayd.
Kooxaha Wax iska caabinta Ciraaq ayaa muujiyay Geesinimo, Waxayna u babac dhigeen Ciidamadda Maraykanka oo adeegsanaya Diyaaradaha dagaalka, Taasina waxay keentay in Maraykanku uu Magaaladda isku hareereeyo si uu uga hortaggo in laga qaxo Magaaladaasi.
Diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ayaa saaka dhawr duulimaad oo ay qaadeen waxay ku duqeeyeen qaybo ka mida Fullujah, Laakiin ma cadda Xadiga uu le’egyahay Qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi.
Dagaalka Fullujah oo ah kii ugu xumaa ee ay la kulmaan Ciidamadda Maraykanku ayaa sababay in Maraykanku uu ku kaco Xasuuq Bini’aadanimo oo aysan jirin cid kala xisaabtamaysa, Waxayna Ciidamadda Maraykanku u duqeeyeen Magaaladaasi si Arxan Darro ah.
Faafin: SomaliTalk.com | April 29, 2004